विभाजनको संघारमा नेकपा, राष्ट्रपतिलाई अघि सार्ने मुडमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्डले देउवासंग किन गरे ‘डिनर मिटिङ’ ? — Sanchar Kendra
विभाजनको संघारमा नेकपा, राष्ट्रपतिलाई अघि सार्ने मुडमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्डले देउवासंग किन गरे ‘डिनर मिटिङ’ ?
काठमाडाैं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको संघारमा पुगेको छ । नेकपा सचिवालयले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको केही घन्टा बित्न नपाउँदै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सन्देश सुनाएपछि विवाद सहतमा आएको छ ।
बुधबार बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले संविधान संशोधन कार्यदल भङ्ग गर्दै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्न मन्त्रिपरिषदबाट राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि गौतमले राष्ट्रियसभामा सदनको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने गरी संविधान संशोधन गरे मात्र त्यहाँ जाने शर्त राख्दै आएका थिए । त्यही कारण अघिल्लो बैठकले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो ।
त्यसको केही घन्टापछि उनले नेता नेपाललाई पुनः बालुवाटार बोलाएर गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्न सिफारिस नगर्ने आफ्नो निर्णय सुनाएका छन् । नेता नेपालसँगको भेटमा पनि ओलीले गौैतमको स्थानमा युवराज खतिवडालाई नै निन्तरता दिन उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । ओलीको यस्तो चाहाना सुनेका नेपालले बैठकमै छलफल गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जवाफ फर्काएका थिए । नेपाल ओलीसँगको छलफलपछि बालुवाटारबाट साँझ बाहिरिएका थिए ।
बुधबारको यो ‘भाँडभैलो’सँगै नेकपाका नेताहरुबीच एकले अर्कोलाई कसरी कमजोर पार्ने र सिध्याउने भन्ने खेल छ भन्ने तथ्य छरपस्ट भएको छ । चाहे त्यो शनिबारको कार्यदल गठनको विषय होस् या बुधबार गौतमको सिफारिसमा ओलीको असन्तुष्टि । जसको सन्देश राम्रो गएको छैन ।
नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘निर्णयप्रति नै कसैको असन्तुष्टि हो भने बैठकमै राख्नुपर्छ । निर्णय गरेर सार्वजनिक भइसकेपछि होइन, गर्दिन भन्नुको अर्थ छैन । यसले राम्रो सन्देश जाँदैन ।’ ती नेताका अनुसार नेताहरुले व्यक्तिगत फाइदा हेरेकाले यो समस्या भएको हो । तर नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीमा सर्वसम्मत भएको निर्णयविपरित कोही नेताले के भन्यो भन्नेको अर्थ नहुने प्रतिक्रिया दिए । ‘बिहान सर्वसम्मत निर्णय भएको हो, अरु थाहा भएन’, उनले भने ।
व्यापारीहरु अजय सुमार्गी, उपेन्द्र महतो र बिनोद चौधरीहरुले प्रचण्डमार्फत सबै घटनाक्रम विकास गराएको बालुवाटारको दाबी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयको अघिल्लो ठकमै डा. खतिवडाको शैलीगत र स्वभावजन्य समस्याका कारण आलोचना भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र दातृ निकाउलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने व्यक्ति भएकाले उनैलाई निरन्तरता दिन चाहेको जानकारी दिएको उनी निकट स्रोतले बतायो ।
खतिवडालाई निरन्तरता दिने संकेत पाएपछि दुई दिनमै चलखेल गरेर बामदेवलाई संविधान संशोधन नभएको अवस्थामा पनि राष्ट्रियसभामा जान तयार पारिएको ओली पक्षको दाबी छ । खतिवडाको शैलीगत कमजोरी हटाउन लगाउने बचन दिँदादिँदै ओलीलाई कमजोर बनाउन बामदेवलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गरिएको बालुवाटारको बुझाइ छ ।
सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई संकटकालीन अधिकार दिने र राष्ट्रिय सभामा सदस्य संख्या थप्ने संकेत समेत गरेको नेकपा स्रोतको दावी छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार यस बिषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति बिध्या भण्डारीसंग छलफल सम्मत गरिसकेका छन् । आफूमाथि संकट आउने भएपछि ओली राष्ट्रपतिलाई अघि सार्ने मुडमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ।
यता यस बिषयमा सुइँको पाएपछि प्रचण्डले बुधबार राति नै राष्ट्रपति भण्डारी र नेकपा अर्का नेता झलनाथ खनाललाई त्यसो नगर्न चेतावनी दिएको पनि स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्रपति भण्डारीलाई संकटकालीन अधिकार दिने ओलीले तयारी थालेपछि प्रचण्डले राति नै पार्टी फुट्नसक्ने चेतावनी दिएको पूर्व माओवादी स्रोतले संचारकेन्द्रलाई बतायो ।
यता नयाँपत्रिका दैनिकले भने नेकपा सचिवालयमा चर्काचर्की, कसले के भने ? शिर्षकमा संवाद सहित समाचार बनाएको छ ।
बुधबार बिहान ११ बजे बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठक सुरुवात गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने– वामदेव कमरेडले राष्ट्रिय सभामा जान संविधान संशोधनको सर्त राख्नुभएको थियो । त्यसैले कार्यदल बनेको हो । यो निर्णय गोप्य राखौँ भन्ने सहमति भएको हो । तर, हाम्रो निर्णयको विषयमा जनमानसबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएन । पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट विरोधको स्वर आयो । हामी पनि द्विविधामा फस्यौँ । अब कार्यदल राखौँ कि भंग गरौँ ? वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रिय सभामा पठाऊँ कि नपठाऔँ ? निणर्य गरौँ । सर्वसम्मत निर्णय गरौँ, नत्र बाहिर राम्रो सन्देश जान्न ।
तेस्रो नम्बरमा तेस्रो वरीयताकै नेता झलनाथ खनाल बोले । उनले भने– हामी सचिवालयका सबै सदस्य संघीय संसदमा छौँ । अब वामदेव कमरेडलाई पनि राष्ट्रिय सभामा लैजाउँ । उहाँका अरु चासोहरू हल हुँदै जान्छन् । आबश्यकता अनुसार संविधान संसोधन पनि होला । तर, अहिले वामदेव कमरेडले म संविधान संसोधन नभई राष्ट्रियसभामा जाँदैजान्न चाहिँ भन्न मिलेन । हामीले भनेपछि आग्रह स्वीकार गर्नुपर्‍यो ।
गौतमले भने : पार्टीको निर्णय मान्छु ।